Isichazwe njengeqhawe inja esindise umniniyo | News24
Isichazwe njengeqhawe inja esindise umniniyo
Bloemfontein – Inja enesibindi, yohlobo lweJack Russell, ishone izama ukusiza umnikazi wayo okhulelwe kanye nendodakazi yakhe eneminyaka emibili ubudala ngesikhathi behlaselwa yinyoka.
Inja eneminyaka eyisithupha ubudala, uJamal, ife ngemuva kokubulala inyoka ngoLwesibili ntambama, kusho umnikazi wayo uKaren van der Berg.
UVan der Berg, 32, uthi ubebhukuda nendodakazi yakhe emzini wabo osePetrusburg, eFree State ngesikhathi sesehlakalo.
Funda nalolu daba: Bonke abashonile bebengabokufika
"Bengicabanga ukuthi inja ibikhonkotha igundane, kodwa ngabona ubuso bayo sebushintsha. Ngabona ukuthi inzima lento eyibonayo,”usho kanje.
Uthi uthuke wacishe woma ebona inyoka engu-1.5m ubude.
"Ngesikhathi inja ilwa nenyoka, ngithathe indodakazi yami ngabaleka nayo ngaya endlini ngayobiza umyeni wami.”
"Inja yethu ibeyiqhawe,” kusho uVan der Berg.